Aza avela hiteny amin'ny marikao ny bot! | Martech Zone
Aza avela hiteny amin'ny marikao ny bot!
Zoma, Jona 1, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Tara Kely
Alexa, ilay mpanampy manokana alefa am-peo an'i Amazon, dia afaka mitondra mihoatra ny $ 10 arivo tapitrisa amin'ny fidiram-bola afaka roa taona monja. Tamin'ny voalohan'ny volana Janoary dia nilaza i Google fa efa namidy mihoatra ny 6 tapitrisa Fitaovana Google Home hatramin'ny tapaky ny volana oktobra. Ireo botsika mpanampy toa an'i Alexa sy Hey Google dia nanjary lafin-javatra tena ilaina amin'ny fiainana maoderina, ary manolotra fotoana mahatalanjona ho an'ny marika hifandraisany amin'ny mpanjifa amin'ny sehatra vaovao.
Vonona handray an'io fotoana io ny marika, maika ny hametraka ny atiny amin'ny sehatra fitadiavana feo. Tsara ho azy ireo - ny fidinana amin'ny tany ifotony miaraka amina sehatra feo dia misy dikany betsaka, toy ny famoronana tranokala ara-barotra misy dikany tamin'ny 1995. Saingy ao anaty haingam-pandeha, orinasa be loatra no mandao ny feon'ny marika (sy ny angona angona mifandraika amin'izany) eny an-tanan'ny botan'ny antoko fahatelo.
Mety ho lesoka mahatsiravina izany. Alao an-tsaina izany Internet izay mainty sy fotsy ny tranokala rehetra, apetraka amina tsanganana tokana ary mampiasa endritsoratra mitovy ny tranonkala rehetra. Tsy hisy hisongadina. Tsy misy na tranokala hita taratra ny fijery sy ny fahatsapan'ireo marika soloin'izy ireo, noho izany dia hahazo traikefa tsy mifanaraka amin'ny mpanjifa ny mpanjifa rehefa mifanerasera amin'ny marika amin'ny sehatra hafa. Mety ho loza amin'ny fomba fijerin'ny marika, sa tsy izany?
Misy zavatra toa izany rehefa manambatra ny rindranasa ho an'ireo mpanampy amin'ny alàlan'ny feo ny orinasa nefa tsy mamorona sy miaro feon-marika tsy manam-paharoa. Soa ihany fa tsy tokony ho toy izany. Raha tokony omenao ny bots mpanampy hifehezana ny feon'ny marikao ianao dia afaka mamorona paikady fifandraisana manokana miaraka amin'ny marika AI alefa miaraka amina fampiharana iray izay natao ho an'ny fifampiresahana am-peo.
Tsy mila manangana rindrambaiko feo avy any ifotony ianao mba hahatanteraka izany - misy vahaolana mifampiresaka API alefa amin'ny API, misy izao mamela anao hiresaka amin'ny mpanjifa na aiza na aiza misy azy ireo - amin'ny telefaona, amin'ny media sosialy, ao amin'ny varavarankely chat na ao an-tranony amin'ny alàlan'ny bot mpanampy. Miaraka amin'ny fomba mahitsy, azonao atao ny mahazo antoka fa ireo resadresaka ireo dia mifanaraka sy amin'ny marika isaky ny mandeha.
Ireo mpivarotra am-barotra voalohany dia mampiasa an'ity paikady ity hikarakarana fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny bot mpanampy, manome valiny amin'ny fanontanian'ny mpanjifa momba ny fisian'ny vokatra na ny fandefasana. Ireo orinasam-piantohana dia mampiasa feo hamaliana ireo fanontaniana momba ny tombotsoan'ny fanofana fiara raha amboarina ny fiaran'ny mpanjifa. Ny banky dia mampiasa sehatra feo hananganana sy hanovana fotoana nifanarahana tamin'ny mpanjifa.
Amin'ny alàlan'ny vahaolana tsara amin'ny feo sy ny vaovao farany, azonao atao ny mahazo antoka fa ampiharina tsara ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa. Ary rehefa mifehy ny feon'ny marikao amin'ny sehatra mpanampy AI ianao, dia ho afaka mampifangaro angona avy amin'ny fifanakalozana feo amin'ny rafitry ny CRM an'ny orinasao. Hanjary manan-danja kokoa izany satria maro ny mpanjifa manao fikarohana amin'ny alàlan'ny feo.
Ny mpandalina indostrialy mahaleo tena Gartner dia naminany izany 30 isan-jato ny fitetezana dia hatao tsy misy efijery amin'ny taona 2020, satria ny fizahana am-peo voalohany amin'ny alàlan'ny fitaovana toy ny telefaona sy ny mpanampy AI dia ahazoana valin'ny fikarohana ara-tsoratra. Azon'ny orinasanao atao ve ny manary an'io data io - na mamela azy hofehezin'ny botan'ny antoko fahatelo? Amin'ny alàlan'ny fifehezana mavitrika ny feon'ny marikao dia azonao atao ihany koa ny mitazona ny angon-drakitrao.
Rehefa mihazona fifanakalozana fifanakalozana eo amin'ny marika sy ny mpanjifa ny mpanampy ny feo, miha-mazava ny loza ateraky ny orinasa manankina ny bikan'ny antoko fahatelo. Mihena ny sandan'ny marika raha tsy mifanaraka amin'ny fantsona ny feo, ary mihamalemy ny fahatokisan'ny mpanjifa. Ny fatiantoka data dia midika fa tsy afaka mamorona mombamomba ny mpanjifa feno sy marina ny marika.
Ny mpitarika ny orinasa mifantoka amin'ny ho avy dia mahatakatra ny tsatokazo, ka izany no maika hamorona fananganana sehatra feo. Misy dikany ny hafanam-pon'izy ireo handray ireo sehatra. Fa zava-dehibe ny famoronana paikady miaro ny tsy fivadihan'ny marika. Raha mikasa ny hiresaka amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mpanampy ny feony ny orinasanao dia alao antoka fa tsy avelanao hiteny ho anao ny botika.
Tags: Alexabotsfeo marikamarikafeo
Mpanavao serial, namoaka mpanoratra sy mpanorina, filoha ary CEO an'ny Rindrambaiko SPLICE, Tara dia mientanentana amin'ny fahafahan'ny teknolojia hanova fiainana ho amin'ny tsara kokoa. Navoakany hatrany izany finoana izany amin'ny fampivoarana ireo haitao izay manatsara ny fiasa, ahafahana manome serivisy tsara kokoa ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifa. Izany dia nitarika ny famoronana orinasa telo manana traikefa ho an'ny mpanjifa ary nanova ny hevitra vaovao ho lasa teknolojia manana patanty sy manan-kery izay mampiasa ny angon-drakitra hamoronana hafatra manokana sy mandeha ho azy.
Chip haingana Index: traikefa EMV haingana kokoa